Wararka - Qalabka macdanta yar yar ee birta waxay leeyihiin iska caabin heerkul wanaagsan iyo sifooyin farsamo oo aad u fiican
Qalabka microporous birta waxay leeyihiin iska caabin heerkul wanaagsan iyo sifooyin farsamo oo aad u fiican. Heerkulka qolka, xoogga maadada microporous metal waa 10 jeer tan walxaha dhoobada ah, iyo xitaa 700 ℃, xooggeeda ayaa wali qiyaastii 4 jeer ka badan tan shey dhoobada. Adagnaanta wanaagsan iyo kuleylka kuleylka ee maaddooyinka microporous biraha ayaa ka dhigaya inay leeyihiin iska caabin kuleyl wanaagsan iyo caabbinta dhul gariirka. Intaa waxa u dheer, maadooyinka microporous-ka biraha sidoo kale waxay leeyihiin guryo wanaagsan iyo sifooyin alxamid ah. Waxyaabahan aadka u wanaagsan waxay ka dhigayaan maadada microporous metal macdanta inay leeyihiin adeegsi balaaran oo ka faro badan qalabka kale ee microporous.
In warshadaha casriga ah, wax soo saarka Ultrasonicroporous biraha iyo farsamada ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. Laga soo bilaabo warshadaha saacadaha hore illaa warshadaha dharka sida ballaaran loo isticmaalo, qalabka shaandhada iyo warshadaha isdaahirinta hawada, ka dibna warshadaha farsamada sare, waxaa jira tiknoolajiyad bir ah oo heer sare ah.
Waxaan haynaa qalab iyo qalab baaritaan oo ka socda Jarmalka, Switzerland, Boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, Talyaaniga, Japan iyo dalal kale. Waxaan leenahay nidaam adag oo taageera wax soo saarka, tijaabada wax soo saarka iyo soo saarida qalabka gaarka ah, lana jaanqaado dhigooda caalamiga ah. Waxaan leenahay awood horumarineed oo wax soo saar leh iyo la qabsiga suuqa.
Shirkaddu waxay leedahay waax cilmi-baaris iyo horumarineed, oo adeegyo wax ku ool ah u siin karta macaamiisha horumarinta wax soo saarka. Intaa waxaa dheer, waxaan nahay kuwo la jaan qaada ruuxa hal-abuurnimo isdaba-joog ah, waxaanan ku dadaalnaa inaan soo saarno wax soo saar wanaagsan, si aan dib ugu celino taageerada macaamiisha. Waqtigan xaadirka ah, awoodda wax soo saarka sanadlaha ah iyo wax soo saarka dhabta ah ee alaabada spinneret ee shirkadeena waxay gaareen in ka badan 30 milyan oo godad, kumanaan alaab ahna waa la farsameeyaa sanad kasta, kuwaas oo ay ka mid yihiin boqolaal wax soo saar cusub. Sababtoo ah badeecadaha la iibsan karo iyo sumcadda suuqa sare, waxay soo jiidatay shirkado badan oo kiimiko ah oo kiimiko ah si ay ula shaqeeyaan shirkadeena. Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 300 isticmaaleyaasha ugu waaweyn suuqa gudaha, iyo saamiga suuqa wax soo saarka ayaa ka badan 50%. Intaa waxaa dheer, badeecadaheena spinneret waxay si tartiib tartiib ah u galeen suuqyada Taiwan, South Korea, Japan, Koonfur-bari Aasiya, Koonfurta Aasiya iyo Yurub iyo Ameerika, waxayna heleen sumcad wanaagsan. Waxay leedahay in ka badan 300 macaamiil in ka badan 40 dal, gaar ahaan Hindiya, halkaas oo warshadaha kiimikada kiimikada ay si dhakhso leh u kobcayaan, taas oo ka dhigan in ka badan 60% saamiga Suuqa.
Habka Wax Soosaarka ee Dharka Aan Xidhnayn, Khadka Waxsoosaarka Maqaarka ee Aan Ku Xidhnayn, Sifeeyaha Filimka Pp, Dharka Aan Xidhnayn, Waxyaabaha Maqaarka ah ee Aan Xidhnayn, Filterka dhalaalaya ee Pp, Dhammaan Alaabooyinka